DAAWO: Musharraxii hadda iscasilay oo Sirtii ugu culseyd ka dhex sheegay Xarunta Doorashada - Hablaha Media Network
DAAWO: Musharraxii hadda iscasilay oo Sirtii ugu culseyd ka dhex sheegay Xarunta Doorashada
HMN:- Musharrax Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo goor dhow ku dhawaaqay in uu ka tanasulay tartanka Xilka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa uu sheegay Sababta uu tartanka uga haray .Waxaa uu xaqiijiyay in fara gelin qaawan oo shisheeya ay ka dhax jirto doorashada soomaaliya islamarkaana waxaa uu ka codsaday Baarlamaanka in arrintaasi ay beeniyaan.
Isagoo si toos ah u tilmaamay in Hadda Xarunta Doorashadda ay ka socoto ay joogaan Dadkaasi faragelinta wada oo shisheeyaha ah.
Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo kamid ahaa musharraxiintii u tartamayey xilka madaxweynaha ayaa markii uu is casilayey wuxuu si dadban xildhibaannada ugu baaqay ineysan dooran Xasan Sheekh Maxamuud.
Waxa uu sheegay Sakariye in maanta uu u jeedo in xildhibaannada ay dooran doonaan shaqsi aad iyo aad ugu wanaagsan shacabka Soomaaliyeed.
Wuxuu sheegay in Hoolka doorashada ay ku sugan yihiin dowlado shisheeye oo musharrax gaar ah tageeraya, wuxuuna kala jeeday Xasan Sheekh, balse wuxuu xildhibaannada ugu baaqay iney taasi beeniyaan oo shaqsi ka duwan midka ay rabaan la doorto.
Soomaaliya ayuu sheegay Sakariye in maanta maalin aad qiimo u leh tahay, loona bahan yahay in mudanayaasha ay u istaagaan sidii ay u